संसारभर आमालाई ठुलो सम्मानका साथ हेर्ने गरिन्छ । आमाले घरमा देखाउने जिम्मेवारीलाई जति नै शब्दले वर्णन गरे पनि कम नै हुन्छ । परिवारमा सबैभन्दा ठुलो जिम्ेवारी आमाको भनेको बच्चाबच्चीहरुलाई एउटा राम्रो संस्कार दिनु हो ।
घरमा आमा आफ्ना छोरीका निम्ति अत्यन्तै गम्भिर हुने गर्छन् । उनीहरुको बानी व्यहोरालाई पनि उनीहरुले नजिकबाट नियाली जिम्मेवार बनाउन खोजीरहन्छन् ।
हरेक आमाले आफ्ना छोरीलाई बताउनै पर्ने ५ कुराहरु
१. स्वाभिमानः हरेक छोरीलाई बताउन जरुरी छ की छोरी केही बन्न सक्छन् र कसैको भर नपरीकन आफ्नो स्वाभिमानमा खडा हुन् सक्छन् ।
२. आफ्नो काम आफै गर्न सक्नुपर्छ
छोरीले आफ्नो काम आफै गर्न आमाले भन्नुपर्छ । आफ्नो कामको बोझ अरुमाथि थुपार्दा निर्भरता बढ्छ ।
३. करिअरको महत्व
आफ्नो खुट्टा उभिन करिअरको ठुलो भुमिका रहेको हुन्छ । पछि गएर कुनै पनि समस्या नहुन पहिला नै करिअरबारे आमाले छोरीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।
४. अरुसगँ गरिने व्यवहार
छोरी ठुली हुदै जादाँ अरुसँग कसरी व्यवहार गरिन्छ यसबारे आमाले विभिन्न रुपमा सम्झाने काम गर्नुपर्छ । छोरीलाई थाहा होस् की कुरा गराइबाट कुन मानिसको नियत कस्ता छ ।
५. आफ्नो बचाउ गर्नसक्नुपर्छ
पछिल्लो समय युवतीहरुमाथि अत्याचारका घटनाहरु बढि नै रहेका छन् । यसलाई रोक्न पनि आमाहरुले आफ्ना छोरीहरुलाई यसबारे खुलेर कुरा गर्न सिकाउनुपर्छ । विभिन्न हिंसका सिकार भएका युवतीहरु चुप लागेर बसेका कारण महिला हिंसाले प्रश्रय पाएको छ । उनीहरुलाई विभिन्न खाले ट्रेनिङ दिएर आत्मविश्वास बढाउन आमाले सहयोग गर्न सक्छिन् ।
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा नेपाल विजयी बनेको छ । शनिबार दशरथ रंगशालामा सम्पन्न खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई २ - १ गोलले पराजित गरेको हो ।
एजेन्सी । तीन वर्ष पहिले ७१ वर्षीय रिचार्ड कीडवेलको साथमा निर्धारित गतिभन्दा बढि सवारी चलाएको आरोपमा सुचना आयो । जसमा १०० पाउण्ड रुपैया जरिवाना लागेको थियो । उनिलाई ४८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिड निर्
एजेन्सी । सामान्यतया बजारमा केराको मूल्य दर्जनको ८० देखि १०० सम्म पर्ने गर्दछ । त्यहीँ तपाईले करीब १ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा केरा बिक्रि भएको त्यो पनि एउटा मात्र केराको खबर सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक
जाडो याममा आफ्नो छालालाई कसरी जोगाउने ?
एजेन्सी । छाला मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो एवम् बाह्य अंग हो । छालालाई सुन्दरताको प्रतिबिम्ब पनि मानिन्छ ।
याैनाङ्गकाे दुर्गन्ध हटाउने घरेलु विधि
समयमै बचौँ है पिनासबाट !
एजेन्सी । तीन वर्ष पहिले ७१ वर्षीय रिचार्ड कीडवेलको साथमा निर्धारित गतिभन्दा बढि सवारी चलाएको आरोपमा सुचना आयो । जसमा १०० पाउण्ड रुपैया जरिवाना लागेको थियो । उनिलाई ४८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिड निर्धारण गरिएको ठाउँमा ५६ किलेमिटर प्रतिघण्टाको स्पिडबाट सवारी चलाएको आरोप लागेको थियो ।